Tifaftir: Ra?iisul-wasaare Farmaajo Waa uu Seegay Dawgii! – Radio Daljir
Tifaftir: Ra?iisul-wasaare Farmaajo Waa uu Seegay Dawgii!
Janaayo 19, 2011 12:00 b 0
Waraysigii uu Talaadadii (18-ka Janaayo) wasiirka koowaad ee Federaalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed ‘Farmaajo’ siiyay idaacadda BBC-da ee uu kaga hadaly arimo dhawr ah oo ay malaha ugu cuslayd aragtida xukuumaddiisu ay ka qabto go?aankii ay Dawladda Puntland ku hakisay xiriirkii wada-shaqayneed ee ka dhexeeyay labada dhinac, waxa uu ahaa mid mudan in la miisaamo.
Mudanuhu waxa uu dhabtii ka hadlay arrimo muhiim ka dhigaya sida ay waajib u tahay in ay wada-shaqayn wanaagsani ka dhex jirto Puntland iyo Federaalka ay ka tirsan tahay, waxana ka mid ahaa:
i) In wax Alle iyo wixii wiiqaya awoodda yar ee Federaalka ay taageero macnawi ah siin karto kooxda Al-Shabab,
ii) In haddii ay Al-shabab ay la wareegto Koonfurta Soomaaliya uu markaa culays la hubo soo fuulayo Puntland iyo dhulka ka sii shisheeya,
iii) In beesha caalamku kasii niyad jabi karto khilaafaadka siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee horay loogu yiqiin heerka Federaalka, haatanna yeelan kara waji cusub oo ah heer Federaal iyo maamul ka tirsan Federaalkaas,
iv) Intaa waxaa ka sii wada muhiimsan oo uu mudane Farmaajo jalleecay sooyaalka Soomaalida iyo dawrarkii ay dadka Puntland soo cayaareen ka hor iyo kadib qarannimadii illa iyo maanta oo ay ugu yaraan ku fara-adaygeen nabadda iyo xasilloonida dhulkooda oo ah ugu yaraan afar dalool midkood.
Dhammaan waa la isla qaadan karaa cabbirka sare ee Ra?iisul-wasaaraha.
Dhammaantood waa qodobbo istraatiji ah, oo labada maamul isku toli kara, mana aha arrimo khiyaar iyo kala doorasho gali kara.
Ka hor dulucda qormadana aan mar kale iftiiminno qodob muhiim ah kaas oo Ra?iisul-wasaaruhu ku tilmaamay in uu mabda? u yahay xukuumaddiisa, kagana duwan yahay kuwii ka horeeyay: maamul wanaagga.
Intaa ka dib, waxaa xaqiiqo ah in mawaaqif iyo hadallo badan oo uu isticmaalay Ra?iisul-wasaaruhu ayan innaba u adeegayn gaaritaanka iyo xaqiijinta mabaadi?da asaasiga ah ee kor kuxusan.
Ra?iisul-wasaaruhu waxa uu ugu yaraan shan jeer ku soo celceliyay, oo uu carrabka ku sii adkeeyay sida isaga oo dooxaya qodob muhiim ah, in maamulkiisu xiriir fiican la leeyahay shacabka Puntland. Waxa uu markhaati ka dhigtay in uu si dhow ula hadlo qaar ka mid ah shacabka nin-doorkooda. Waxa uu si cad u kala saaray shacabka Puntland iyo maamulkooda.
Erayadaasi waxa ay xusuusta in badan ku soo celinayaan waayihii madoobaa ee Puntland iyo natiijooyinkii shirkii Carta (Dawladii Carta, 2000), yeelkeede aan mudanaha xusuusinno in dawladda Puntland ay si dastuuri ah ku matasho shacabka oo ay ku doorteen si waafaqsan rabitaankooda iyo dastuurkooda. Tallaabada Ra?iisul-wasaaraha waxa ay si aan lagu khasbanayn u sii fogeeyn kartaa qotoda farqiga labada dhinac. Ra?iisul-wasaaraha oo isaga oo ku saxan sheegay in maamul-wanaagu uu yahay shardi asaasi u ah guusha xukuumaddiisa in uu misana dhinaca kale, kutala-gal iyo kutala-gal-la?aan kay doonto ha ku ahaatee, uu kala saaro maamul iyo dadkii doortay wax meesha qabta maahayn.
Abraham Lincoln (M/weyne US, 1861?1865) ayaa sida ugu fiican noogu qeexay waxa ay tahay dawlad amma (government) makrii uu ku tilmaamay ?tan dadka, dadku samayteen, dadkana u adeegta.? Maamul-wanaag ayaan u taagnahay maamul iyo dadkiisna anaa ku kala dhex jira iyaduna maaha war is-qabta.
Arrin kalena waxay tahay, Ra?iisul-wasaaruhu waxa uu ugu yaraan laba jeer kusoo celiyay in uunan dhegaysan go?aanka ka soo baxay Puntland, wax badanna kala socon. Waxa xusid mudan in bayaanka Dawladda Puntland uu isla maalintii uu soo baxay ku jiray dhammaan mareegaha Soomaalida iyo ajnabigaba idaacado badanna laga sii daayay.
Waa suura-gal in uusan Ra?iisul-wasaaruhu dhegaysan idaacadaha ama daalacan mareegaha, laakiin waxaa hubaal ah in go?aanka Puntland uu ahaa dareen weeyn oo ku soo kordhay saaxadda siyaasadeed ee Soomaaliya. Haddiiba ayan arintu keenin in Ra?iisul-wasaaruhu safarkiisa soo gaabsho, ama meel kasta oo uu marayo ka furo khad kulul iyo qol-xaaladeed ugu yaraan waxa la fili karay in mas?uul ka mida xafiiskiisa uu arintaa ula soconayo oo uu warbixin joogto ah ka siinayo hadba heerarka ay ka tallabayso. Wax kasta oo intaa ka yar waxa kaliya oo ay muujinayaan in ayan Puntland haba yaraatee ugu jirin arimaha uu siinayo mudnaanta koowaad, labaad iyo saddexaad midna. Taasina maaha mid la socon karta qodobbada asaasiga u ah in ay si dhaw u wada-shaqeeyaan Federaalka iyo Puntland sida uu Ra?iisul-wasaaruhu ruuxiisa u dhigay.
Qodob saddexaad baannu ku soo xiraynaa qormadan. Ra?iisul-wasaaruhu waxa uu si uu ku saxan yahay u yiri wixii kala-tabasho ah waxay ku fiican yihiin in si toos ah loo wadaago loogana xaajaysto. Dabcan taasi waxay u adeegaysaa mabaadi?da asaasiga ah ee sare ku xusan.
Haddiiba ay dhacday in Puntland arinka bannaanka u soo saarto heer wasiir, qodobo kulligood loo qaateen ah, ama ugu yaraan laga wada doodi karana miiska soo saartay sida ku cad bayaanka, in Federaalka uu dhiniciisa uga jawaabo illaa heer Ra?iisul-wasaare, misana jawaabuhu noqdaan kuwo kulligood aan haba yaraatee caawinayn xakamaynta xaalladda aloosan, iyaduna maahayn arrin la liqi karay.
Intaa waxaaba sii dheer in Ra?iisul-wasaaruhu si toos ah uga horyimid mowqifka cusub ee ay dawladda Maraykanku ku waajahasyo xaalka Soomaaliya ee Dual-Track-ga, kaasoo ay Dawladda Puntland ay aad u soo dhawaysay, una aragto guul heer caalami ah oo u soo hoyatay.
Dawladda Puntland iyada ayaa dhiciska dhalashadiisii, nuujintiisii iyo daadihiintiisiiba waqti badan oo marag-ma-doone ah soo galisay. In ay taageertana waa waajib saaran, yeelkeede waxa muhiim ah in ay madaxda Federaalka ee xilligan ogaadaan in Puntland ay si fiican ugu kala soocan yihiin taageerada ay u hayso haykallada dawladda (TFI institutions) iyo tan ay u hayn karto hoggaanka markaa caynka u haya.
Taageerada uu Wasiirka koowaad sheegay in uu ka haysto shacabka Puntland-na waxaa naqdiyey, ra?yi kiisa ka duwanna Arbacadii xigtay (19-ka Janaayo) soo saaray shacabka magaalooyinka Boosaaso, Galkayo iyo Garowe oo mudaaharaad iyo shirar ku taageeray go’aanka dawlada Puntland. Haatanna Ra?iisul-wasaaraha ayaa looga fadhiyaa in uu wadaanta ka soo saaro ceelka salkiisa.
Idaacada Daljir http://daljir.com/
Banaanbax lagu taageeray mawqifka dawlada Puntland oo ka dhacay Garowe.
Duqa magaalada Bossaso oo ganacsatada waratada ah ugu baaqay in ay baneeyaan mid ka mid ah wadooyinka magaalada Bossaso.